2014 October | प्रवीण बानियाँ | Prabin Baniya
October 30th, 2014 विचार-दृष्टिकोण No Comments »
October 20th, 2014 पुस्तक-समीक्षा 1 Comment »
October 18th, 2014 पुस्तक-समीक्षा No Comments »
October 15th, 2014 विचार-दृष्टिकोण No Comments »
जतिबेला शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्दै थियो, त्यतिबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा नियुक्त भएका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले भनेका थिए, ‘यो पूरानै संरचना र माण्यतामा आधारित परम्परागत सरकार हो । यसले रातारात कुनै चमत्कार गर्दैन । यो सरकारबाट कसैले पनि धेरै आसा नगरे हुन्छ ।’
संक्रमणकालिन समयमा बनेको सरकार त्यसमा पनि संविधानसभाको ताजा निर्वाचनलगत्तै बनेको सरकारमा सम्मिलित दलका मन्त्रीले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले उतिबेलै संकेत गरिसकेको थियो, कोइराला सरकारसँग समकालिन राजनीतिक परिवेशमा धेरै अपेक्षा राख्नु बेकार हुने छ । हुन त सरकार गठनको विषयलाई लिएर आम जनताको तहमा त्यत्रो ठूलो उत्साह जागेको पनि थिएन । यद्यपी, व्यापक निराशाा र अन्योलका बीचबाट भएको निर्वाचनमा जनताले उत्साहका साथ मदतान गरेका थिए । तर, सरकार गठनको यतिका महिना बितिसक्दा सरकारले न्यूनतम आसा पनि संचार गर्न सकेको छैन । बरु, राजनीति निराशााको उल्टो बाटोमा छ । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नका लागि ‘सियदिने’ कार्यावधि नकै महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षमतावान् सरकारले उक्त समयमा चमत्कार नै गरिहाल्न नसके पनि आम जनतामा सकारात्मक आशा संचार गर्न भने सक्छ । तर, कोइराला सरकारको हकमा त्यो देखिएन । सरकार गठन र विस्तारमै सय दिन बिताएको सरकारले सुरुमै जनतामा चरम निरााशा बाँडिदियो ।
October 10th, 2014 व्यक्ति-अभिव्यक्ति, साहित्य No Comments »
दसैँः केही अनुभूति
दसैं नेपालीको राष्ट्रिय पर्व हो । यो सबैभन्दा ठूलो र लामो प्रतीक्षाको पर्व पनि हो । वैदिक ग्रन्थअनुसार दसैंको सांस्कृतिक सन्दर्भ लामो छ । सामान्तयाः दसैंको ऐतिहासिक मूल्य–मान्यताको पक्षलाई हेर्ने हो भने यो भगवान् रामको कथासँग गएर जोडिन्छ । रामले रावणको वध गरेर विजय हाँसिल गरेको पृष्ठभूमिका आधारमा दसैंलाई विजयउत्सवका रुपमा मनाउन थालिएको हो । अनि, माता दुर्गाले महिषासुर नामको राक्षसको वध गरेर सम्पूर्ण मानव जातिलाई मुक्ति दिलाएको ऐतिहासिक किंवदन्तीका आधारमा पनि यो पर्वलाई शक्तिस्वरुपका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
खास गरी दसैं पर्वलाई विजय उत्सवका रुपमा मनाउने गरिन्छ । दसैंले शक्ति र वीरताको संकेत गर्छ । आज पनि बहुसंख्यक नेपालीले दसैंलाई ‘असत्यमाथि सत्यको जीत’का रुपमा ग्रहण गर्छन् । र, रातो टीका लगाएर हर्साेल्लासका साथ मनाउछन् । अतः यो नेपालीको पूरानो र महत्वपूर्ण पर्व हो । जुन हाम्रा पुर्खाहरुले प्राचीन कालदेखि नै मनाउँदै आए । आज हामीसम्म आइपुगेको छ । यसको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ जेजे भए पनि दसैं करोडौं नेपालीका लागि मन जोड्ने, सद्भाव जगाउने र एकताको सूत्रमा बाँध्ने पर्वका रुपमा रहँदै आएको छ ।
October 10th, 2014 अन्तरवार्ता No Comments »
‘सहस्र थकान मेटाउन कविता लेख्छु’
चित्रकार कवि चन्द्र रानोहोंछाको कविताकृति ‘थिबिया चराको गीत’ हालसालै प्रकाशनमा आएको छ । उक्त कृतिले यस वर्षको ‘छत्र–विष्णु राई कृति पुरस्कार’ पायो, पन्ध्र हजार रुपैयाँको थैलीसहित । यही सेरोफेरोमा रहेर चन्द्र रानोहोंछासँग प्रवीण बानियाँले गरेको कुराकानी:
## बजारमा ‘थिबिया चराको गीत’ले राम्रै चर्चा पायो नि, कस्तो लागिरहेको छ ?
>> कस्तोलाई राम्रो चर्चा भन्ने ? आलोचनालाई कि प्रंशसालाई ? या सम्मान–पुरस्कारलाई ? म यसलाई चर्चाभन्दा पनि प्रतिक्रिया भन्न रुचाउँछु । यौटा इमान्दार कविका निम्ति जुनसुकै कोणबाट प्राप्त आलोचना या टिका–टिप्पणी जहिल्यै महत्वपूर्ण हुन्छन्, त्यसलाई ग्रहण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । बाँकी कुरा त काम गरेपछि परिणामहरु निस्कन्छन् नै, उपस्थितीले धेरथोर स्पेस लिइहाल्छ, त्यो आम कविको हक हो ।